सडकमा नाङ्गै उभिएर कांग्रेसको नाटक - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
नेपाली कांग्रेस आन्दोलनको मुडमा देखिएको छ । आन्दोलनको मुडमा आएर मात्रै पनि भएन । त्यसका लागि गतिलो मुद्दा हुनुपर्यो, जुन मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा जान सकियोस्, सरकारका कामकारवाहीमा बाधा हाल्न सकियोस् र आमजनताका बीचमा आफू लोकप्रिय बन्न सकियोस् ।
नेपाली कांग्रेस त्यही मुद्दा खोज्दै थियो आन्दोलनको लागि । अहिले त्यसका लागि कांग्रेसले मुद्दा भेटाएको छ– डा. गोविन्द केसी, गङ्गामाया अधिकारी र माइतीघर मण्डला ।
माइतीघर मण्डलामा सरकारले जुलुस प्रदर्शनका लागि निषेध गरेको छ र त्यसका लागि निश्चित ठाउँ तय गरिदिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यसलाई नागरिक अधिकारको कटौती भन्न सकिएला । सरकारको यो निर्णय कत्तिको उपयुक्त वा अनुपयुक्त हो ? बहसकै विषय हो यो । प्रतिपक्षीको नाताले यो विषयको उठान गर्न खोज्नु र निषेधित क्षेत्र तोड्नुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न ।
बाँकी दुई विषय डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले उठाउनु सर्वथा हास्यास्पद र नाटकमात्र हो । यसलाई सडकमा नाङ्गै उभिएर कांग्रेसले देखाएको नाटक भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।
नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न सांसदहरु पठाएको कुरा आइरहेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरु अनसनरत गंगामाया अधिकारीलाई भेट्दै ऐक्यवद्धता जनाइरहेको र त्यही विषयलाई उछाल्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रखर वक्ता गगन थापा नै स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा डा. गोविन्द केसी दाङ पुगेर आमरण अनसन बसेका थिए । त्यसअघिका आमरण अनसन हुँदा पनि केहीमा बाहेक सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता थियो । वास्तवमै नेपाली कांग्रेस डा. गोविन्द केसीको मागप्रति सकारात्मक हुन्थ्यो भने आफू सरकारमा छँदै सम्बोधन गथ्र्यो तर गरेन । ऊ कहिल्यै डा. गोविन्द केसीका मागहरुप्रति सकारात्मक भएन र डा. केसीसँग सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्दै गरेन । त्यसकारण कांग्रेसले आन्दोलन उठानको गतिलो मुद्दा ठानेर यो विषयलाई उछाल्दा स्वयं हाँसोको पात्र बनेको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि गङ्गामाया अधिकारी पनि आमरण अनसनमा बस्न थालेको अहिलेदेखि होइन । अझ त्यसभन्दा अगाडि बढेर गङ्गामाया अधिकारीका श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीले आमरण अनसन बस्दाबस्दै मृत्युवरण गर्नुपर्यो । छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको र हत्यारालाई कारवाही गरियोस् भन्दै न्यायको भीख माग्दामाग्दै मृत्युवरण गर्नका लागि वाध्य बनाउने सरकार पनि नेपाली कांग्रेसकै थियो । आफू सत्तामा हुँदा नेपाली कांग्रेसले गङ्गामायाको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको खै ? गोहीको आँसु चुहाउनुको कुनै अर्थ छ र ?
नेकपा र त्यसको सरकार यतिबेला परीक्षा दिइरहेको छ । कति प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुन्छ वा अनुत्तीर्ण ? त्यो पाँच वर्षपछि जनताले मूल्यांकन गर्ने नै छ । नेकपा र त्यसको सरकार परीक्षा लिइरहेका जनताले एक एक हिसाव राख्ने नै छ । तर, आफू सत्तामा हुँदा डा. गोविन्द केसी र गङ्गामाया÷नन्दप्रसाद अधिकारीका मागहरुप्रति रत्तिभर सम्वेदनशील नहुने नेपाली कांग्रेसले अहिले विपक्षीमा रहँदा त्यही विषयलाई उछाल्न खोज्नु सर्वथा हाँसोको विषय मात्रै हो । यो त नाङ्गै सडकमा उभिएर नाटक प्रदर्शन गरेजस्तो भएन र ?